Soomaaliya oo ka qeybgashay Shirka Xiriirrada kubadda gacanta Jaamacadda Carabta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
CAIRO – Mareeg.com: Dalka Soomaaliya inkastoo burbur iyo dib u dhac uu soo maray, hadana dhinaca Sportiga waxaa u ahaa,halka keliya muujineysay jiritaanka dalkan ku yaala geeska afrika iyadoo dhamaan shirarka caalamiga ee dhaq dhaqaaq kasta oo ciyaaraha aysan ka baaqsan Madaxda heer Olympic iyo heer Xiriiro.
Xiriirka Kubadda Gacanta ee dalka ayaa waxaa uu dhowaan ka qeyb galey shirweynihii kubadda Gacanta ee dalalka Carabta oo ay Somaliya xubin ka tahay, waxaana kulankaasi u metelay Soomaaliya Xoghayaha XSKG Nuur Maye Cismaan.
Shirweynaha Xiriirka kubadda gacanta ee Jaamacadda Carabta ayaa waxaa ka qeybgaley ilaa 16-dal oo Somalia qeyb ka tahay, sida uu sheegay Nuur Maye, waxaana halkaasi lagu doortey gudoomiye iyo xubno cusub oo hogaamin doona Xiriirkaasi.
Nuur Maye ayaa halkaasi ka jeediyey qudbad ku saabsanayd howlaha XSKG ee dhinaca tartamada iyo ka qeybgalka tartamada gobolka, iyo sidoo kale waxyaabaha horumarinta ee ay Xiriirkooda u baahan yahay in laga gacan siiyo.
“Waxaanu soo marney xaalado kala duwan, iyadoo madaxda XSKG ee ku sugan dalka ay ku shaqeeyayaan xaalado adag, sidaasi oo ay tahay waxay qabtaan tartamadii noocyada kala duwan ee Ragga iyo Dumarka,hadii ay ahaan lahayd horyaalka,koobabka munaasabaha iyo ka qeybgalka tartamada ka dhaca gobolka” ayuu yiri xoghayaha.
Madaxda halkaasi lagu doortey ee hogamin doonta Xiriirka K.Gacanta ee Carabta ayaa si weyn ula dhacdey warbixinta Xoghaha XSKG ee Soomaaliya, waxaana ay balan qaadeen in ay dalka ka caawini doonaan dhanka Horumarinta, tababarada iyo seminaarada tababarayaasha iyo garsoorka mustaqbalka dhow.
Xoghayaha oo markii uu shirweynaha dhamaadey shirar gaar gaar ah la yeeshay Madaxda Xiriirada qaar, ayaa waxaa uu kala hadlayey xiriirka ka dhexeeya dalka Somalia iyo dalalka carabta iyo sidii gacan looga siin lahaa dalka ay dagaaladu la degeen dhinaca Horumarinta Kubadda Gacanta, iyadoo halkaasi loogu sameeyey balan qaadyo.
“Madaxda Xiriirka dalka Jordan oo ka mid ahaa madaxdii aan la shirey, waxay ii balan qaadeen in tababar dhinaca macalimiinta dumarka ah u qaban doonaan bisha April ee sanadkaan, kaasi oo ka dhici doona Jordan waxaana rajeynayaa in ay macalimiinteenu ka faaideysan doonaaan”ayuu raaciyey.
Shirweynaha oo ka dhacay magaalada Cairo ee caasimadda Masar ayaa waxaa goob joog u ahaa Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Gacanta ee Aduunka Dr.Xassan Mustafa waxaana halkaasi gudoomiye loogu doortey Musharaxa u dhashey dalka Sacuudiga Dr.Turki khalwi iyadoo Dr Khalid Dowani oo Masar u dhashey iyo Dr Isse Al Ni’mii oo Emaraatka ah loogu doortey gudoomiye ku xigeenada Xiriirka Carabta.
Shirweynaha ayaa ugu danbeyntii waxaa lagu go’aamiyey oo lagu sameeyey isku-aadka tartanka koobka Boqor Fahad ee dalalka carabta, kaasi oo bartamaha bishan March ka bilaaban doona dalka Tunisia.
Muqdisho: Wakiilo ka socda Baarlamanka Uganda oo la shiray gudoonka Baarlamanka Somalia